July Dream: Why July Dream?
ဘယ်လိုမှမမြင်တွေ့နိုင်တဲ့ အွန်လိုင်းကမ္ဘာကြီးထဲမှာ အိပ်မက်ထဲ ထည့်မက်ချင်စရာ နာမည်လှလှလေးအဖြစ်ကနေ လွန်မြောက်ဖို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။
မဂျူလိုင်ဆိုပြီးလာမှားတတ်ကြလွန်းလို့ စာလုံးကြီးနဲ့သာ ရေးထားဗျာ။ ဒါမှမဟုတ်နန်းညီလိုသာ ကြော်ငြာထားလိုက်
ကိုဂျူလိုင်ရဲ့7 July အကြောင်း လာနားထောင်သွားပြီဗျို့ ။ :)
သြော်7July လား
မမေ့နိူင်စရာနေ့ လေးတနေ့ မှာ မွေးခဲ့တာပေါ့နော်
ဘယ်လိုလုပ်ပြီးမေ့ရပါ့7July
နစ်ခ်လေးကတော့ နူးနူးညံ့ညံ့လေးပါ ..
ဓါးမနဲ့လိုက်ခုတ်တယ်ဆိုတော့ ... ??????????
စိတ်ကြီးတယ်နော် .. :D
အခုလို nick အကြောင်းသိရတော့ ပိုရင်းနှီးသွားပါတယ်။
ကိုအိန်ဂျယ် အန် ဒီမွန်လိုပါပဲကွယ် :)
ကိုဂျူလိုင် ဒရင်းလို့ အပြည့် အစုံ ခေါ်ရတော့မယ် ထင်တယ်။ ယုန်သူငယ်လေးလို့ ခေါ်ရမှာလည်း အခက်သား။ ၀ိတ်များလွန်းလို့ သံကုတောင် ကျိုးတယ်လို့ ၀န်ခံထားဘူးတာကိုး.။
အစမှာတော့ မိုးကို ချစ်သလေး၊ အိပ်မက်ကို ချစ်သလေး နဲ့ တကယ့် နူးနူးညံ့ညံ့။
ဖတ်ရင်းနဲ့ ၀က်သားခုတ်တဲ့ ဓားမကြီးနဲ့ လိုက်ခုတ်တယ်၊ ကြာပွတ်နဲ့ ဆော်တယ် ဆိုတော့...
အင်းးးး ကိုဂျူလိုင် ကိုဂျူလိုင် လို့ပဲ..။
နံမည်ကို တွေ့တာနဲ့ ထင်တော့ ထင်နေသား...
ခုတော့ ထင်တဲ့ အတိုင်းပဲ...း)
သေနတ်သာရှိရင် အဲကောင် သေပြီ...
နောက်ဆို အခွင့်အရေးရရင် အနားမှာ သေနတ်တလက်သာ ဆောင်ထားပေတော့...း)
ဒီနေ့ မှာမွေးတော့ ..........
777 ဆိုပြီး ....
အာဂ ကို July ပါတကား
ဘုရား ဘုရား ကြောက်တတ်ပါတယ်ကွဲ့ ....
လမ်းမှာ တွေ့ ရင် တမိုင် အကွာလောက်က ပြုံးပြထားလေမှ... :)
ဟီး အခုမှပဲ ရာဇင်ဝင်လေး သိတော့တယ်း)
ဟ.. လက်စသတ်တော့ ကိုဂျုကြီးက သိုင်းလောကထဲက ဓားသိုင်းသမားကြီးပါလားဗျ
ဂေါ်မိသောခေါ ပါဗျား... ဟိဟိ ကျနော်လဲ အိုးဖုံး သိုင်းဆရာကြီးနော် (သင်္ဘောသားချင်းရန်ဖြစ်ရင်း အိုးဖုံးနဲ့ဆော် လိုက်တာနဖူးကွဲအောင်ချဖူးလို့) ဟီး.နေဦးဗျာ
ဘလော့ဂါတွေကို သိုင်းလောကထဲ ဆွဲသွင်းပြီး
သိုင်းသမားတွေ ဖြစ်အောင် ရေးဥိးမယ် ဟဲဟဲဟဲ
မင်းတော့.. နော်...ဒီစာဖတ်မိတဲ့ ကောင်မလေးတွေ
ဓါတ်ပုံ ထဲ ကကောင်မလေး မဖတ်မိပါစေနဲ့
only 38 days to your birthday. :D :P so how you will celebrate this year?
ကျွန်တော့်ရဲ့ အိပ်မက်ကတော့ တစ်မျိုး အစ်ကိုရ ;)
ကြာပွတ်နဲ့တောင်ရိုက်တယ်လား ကြက်သီးပါထတယ် နားထဲမှာရွှမ်းရွှမ်းနဲ့ ဟိဟိ
ဂျူလိုင်အိမ်မက်က ဒီလိုဖြစ်လာပါတယ်ပေါ့နော်း)
အိပ်မက်ကြီးကလည်း လက်နက်တွေစုံလိုက်တာ.... နေ့အိပ်မက်တော့ နေ့အိပ်မက်ပဲ သွားမက်ပါတော့မယ်.... :
ခန့် ခန့် ကြီးနဲ့ 
စန့် စန့် ကြီး ဖြစ်နေမှာဗျနော်